EMBA umphakeli omkhulu futhi obaluleke kakhulu wemikhiqizo yamaphepha asetshenziswe kabusha, enza iqhaza elikhulu ekuvikelweni kwemvelo. I-EMBA yinkampani yaseCzech enamasiko amade futhi enesibopho sokuzibandakanya nomphakathi nemvelo. Imikhiqizo yayo ye-organic ikhiqizwa ngokucubungula iphepha lokungcola futhi iphinda iphinde isebenze. Ngemikhiqizo yayo, i-EMBA nayo inengxenye ekuvikelekeni nasekugcinweni kwamagugu amasiko kanye nawomlando emazweni amaningi. Njengomqashi omkhulu wesifunda, ibona umthwalo wayo wemfanelo wokuthuthukisa isimo sokusebenza esimeme nesiphephile sabasebenzi baso, kanye nokuzibophezela ekufakweni kwesandla ekuzinzeni kwezenhlalo yesifunda sonke.
Ukuqala komlando amakhadibhodi Paseky nad Jizerou onyakeni 1882, lapho kwakukhona Rösslerovými abazalwane wasungula efektri ngezandla ezimhlophe imikhiqizo amakhadibhodi emaphaketheni ukuze umkhakha ingilazi in the Jablonec esifundeni. Ukwandiswa kohlelo lokukhiqiza kanye nezindawo zokukhiqiza kuyisici sesikhathi sonke sokuphila kwenkampani.
EMBA EMBA spol. s ro amakhadibhodi smooth Paseky nad Jizerou isibopho ukukhiqizwa amakhadibhodi production paper
Amathegi: EMBA EMBA spol. s ro amakhadibhodi smooth Paseky nad Jizerou isibopho ukukhiqizwa amakhadibhodi production paper